Banner News – purnakhabar.com
‘ए’ डिभिजन लिग आज तीन खेल हुँदै कुन-कुन समुह भिड्दैछन् ?
मङ्सिर ७, काठमाडौँ । शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत आज तीनवटा खेल हुँदैछन् । आज पहिलो खेल एन्फा मैदान सातदोबाटोमा ब्रिगेड ब्वाइज क्लब र सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लबबीच हुनेछ । अर्को खेल सोही मैदानमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लबबीच हुनेछ । तेस्रो खेल हल्चोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको खेल मैदानमा मछिन्द्र क्लब […]
एकाबिहानै सार्वजनिक यातायातमा लुटेरा समूह पसेपछि…
मङ्सिर ७, काठमाडौं । बिहान छ बजे पाँचजनाको समूह महानगर यातायातमा यात्रुका रुपमा पस्छ। उनीहरुले रिङरोड रुटको बालाजुदेखि कलंकीसम्मको यात्रामा यात्रुलाई छानीछानी लुट्छन्। यो खबर हामीले नागरिक न्युजबाट लिएका हौ । चालक, सहयोगी र यात्रुसमेत डरले प्रतिकार गर्ने या प्रहरीलाई खबर गर्नेभन्दा पनि चुपचाप रहन्छन्। बस गुडिरहन्छ, यात्रु चढिरहन्छन्, लुटेराहरु लुटिरहन्छन्। रिङरोडको सात किलोमिटर दूरीसम्म […]
तुलसीपुर–घोराही सडकमा चल्ने सवारी साधनको भाडादर तोकियो (भाडादरसहित)
मङ्सिर ६, दाङ । दाङको तुलसीपुर देखी घोराहीसम्मको भाडा ५४ रुपैया कायम गरिएको छ । दाङको स्थानीय रुटमा सञ्चालन हुने राप्ती अञ्चल सार्बजनिक यातायात बस ब्यबसायी समिति, अम्बिकेश्वरी तथा सम्पूर्ण प्रालिहरुले सोही भाडा कायम गरेका छन् । त्यस्तै तुलसीपुर देखि प्रसेनी सम्म ११, बिजौरीसम्म ११, हमन्तपुरसम्म १७, बेलझुण्डीसम्म २२, दुधराससम्म २४, मज्गैसम्म २८, खैरासम्म ३०, […]
प्युठानको सिरक डसना उद्योगमा आगलागी हुँदा ६५ लाखको क्षती
मङ्सिर ६, प्युठान । प्युठानको एक उद्योगमा आगलागी हुँदा ६५ लाख बढिको नोक्सानी भएको छ । बिहिवार दिउँसो प्युठान नगरपालिका–७ पुण्यखोला स्थित सुप्रिया सिरक डसना र मिल उद्योगमा विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको हो । आगलागीबाट उद्योगमा रहेका सबै सामान जलेर नष्ट्र भएको भएको उद्योगका सञ्चालक प्रदिप केसीले बताए । उनका अनुसार तयारी सिरक डसना, […]
कांग्रेसको प्रश्नः नेपालमा सरकार छ ? छ भने कहाँ छ ?
मंसिर ६, काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गरेको छ । बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार गठन भएको ९ महिना पुग्दा पनि देशमा सरकार भएको महसुस गर्न नसकिए बताए। ‘नेपाल देशमा सरकार छ? छ भने कहाँ छ?’, प्रवक्ता शर्माले भने। उनले […]
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनले भन्यो- ‘कारवाहीमा परिसकेका व्यक्तिबाट सचेत रहनुहोस’
मङ्सिर ६, काठमाडौँ । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालले पार्टी र संगठनवाट निष्काशितहरुसग सचेत रहन आग्रह गरेको छ । साथै उसले यही मंसिर ८ गते हुन गईरहेको मातृ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बृहत आमसभालाई सफल पार्नका लागि सहयोग गर्न आम जनसमुदायलाई आग्रह समेत गरेको छ । संगठनका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रे र महासचिव हिम विष्टले आज एक […]
भ्रमणमा चिरीबाबुको कीर्तिमानी, विद्यासुन्दर पनि पछिपछि
मंसिर ६, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन सबैभन्दा धेरै विदेश जानेमा परेका छन् । महर्जन सोमबार राति मात्रै साताव्यापी भ्रमणको समय मिलाएर भियतनाम उडेका छन् । केही समयअघि मात्रै उनी मंगोलिया पुगेर फर्केका थिए । यो सहित महर्जनको ११औं विदेश भ्रमण हो । उनी प्रमुखका रूपमा निर्वाचित भएको एक वर्षभित्रै ११ पटक विदेश […]
निर्मलालाई न्याय दिन छाडेर सुन्दरी जिताउन लागे पूर्वएमालेका यी नेताहरू
मङ्सिर ८, काठमाडौं । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तले न्याय नपाएर बुबाआमा धर्ना बसिरहेका बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरू भने सुन्दरी जिताउने अभियानमा लागेका छन् । एमाले पृष्ठभूमि भएका नेताहरूले विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिन पुगेकी श्रृंखला खतिवडाका लागि सामाजिक सञ्जालहरूबाट धमाधम भोट मागेका छन् । भोट माग्ने सूचीको अग्रस्थानमा नेकपाका स्थायी समितिद्वय […]
हिमालयन बैंकले सुरु गर्यो हाईएमबि माेबायल बैंकिङ एप
मङ्सिर ५, काठमाडौँ । हिमालयन बैंक लिमिटेडले हाईएमबि माेबायल बैंकिङ एप सुरुवात गरेकाे छ । “हियर इज याेर न्यु बैंक” तथा “बिग बैंक इज स्मल साइज” भन्ने नाराका साथ बैंकका बरिस्ठ महाप्रबन्धक इजाज कादिर गिलले उक्त एपकाे सुरुवात गरेका हुन। उक्त माेबायल एपबाट ग्राहकले अाफ्नाे खाताकाे जानकारी लिने, चेक व्यवस्थापन गर्ने, अाफुले लिएकाे रिनकाे बारेमा […]